पत्र कारको बुढी चिक्दा - Indian Girls Nude XXX Images
मेरो घरमा आजकल यौटा पत्रकार अनि उस्कि यकदमै सुन्दर पत्नि भाडामा बस्न थालेका थिय। म पनि पत्रकार सङग कुरा गर्ने बाहानामा उनिहरुको कोठामा प्राय पुगिरहन्थे। पत्रकार प्राय समाचार लेखन , आफ्नो ब्लग लेख्न अनि फेसबुक लाईक पेजको प्रचार प्रसारमा नै लागि रहन्थ्यो। पत्रकारको जिनदगि भनेको तेहि कुराहरुमा नै घुल्मिल भाको थ्यो। कोठाबाट प्राय समाचार सङ्कलन गर्न बाहिर पनि गैराखदथ्यो । म जिस्काउथे पत्रकारलाई होइन बन्धु अरुलाई भने यो हेर् त्यो हेर् भनेर फेसबुक पेजमा बिभिन्न नग्न केटिहरुको फोटो हाल्ने अनि खालि धेरै लाईक बटुलेर पैस कमाउने मात्र हो कि यति रामरि बुडि सङ रमाईलो पनि गर्नि? पत्रकार मेरो कुरालाई त्यति ध्यान दिदैन थ्यो अनि उस्कि बुडि भने हासि रहन्थि र भन्थि पत्रकार लाई आफ्नो घरको दुख पिडा काहा थाहा हुन्छ र? खालि अर्काको चियो चर्चो गर्दैमा फुर्शद् हुदैन।।।। यो कुरा सुन्दा पत्रकारको बुडिलाई पनि पत्रकारले अन्तुस्टि दिन सकेको रहेनछ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मैले बिस्तारै पत्रकारको बुडिसङग जिस्किने अनि आउनेजाने गर्न थाले। पत्रकारलाई केहि गुनासो गरि भने उस्ले सुन्दैन त्थ्यो तेसैले म छु नि किन आतिन्छेउ भनेर उस्लाई भनि दिन्थे। उ भन्थि सबै कुरा तपाई बाट कहा हुन्छ र? पतिको पनि कुनै जिमेबारि हुन्छ नि। पत्रकार खालि हासेर टारिदिन्थ्यो अनि आफ्नो काम मा निक्लिन्थ्यो, प्राय कामहरु म नै गरिदिन्थे पत्रकारको बुडिको तैपनि उ यो भयेन त्यो भयेन भनेर गुनसो गरिरहन्थि । धेरै दिन्हरु बितेपछि पत्रकारको बुडि सङग म हातै हालेर जिस्कन थलिसकेको थिये। फेरि पत्रकार्कै गुनसो गर्थि यो गरेनन त्यो गरेनन् , मेरो भवना बुझेनन आदि आदि। मैले यक दिन मुखै चोलेर भने ल मलाई बोलाउन त यकदिन तिम्रो मनको भवना बुझ्नलाई हेरु कस्तो रहेछ? उ पनि आजकल डर नै नमनि भन्थि ल आउनुस न त। मै ले पनि अब ढिला गर्न हुदैन भनेर यकदिन पत्रकार नभको मौका पारि उस्को कोठामा गये। मैले आज केहि गर्नै पर्ने निढो गरि उनको कोटठा तिर लागे. कोठामा बिभिन्न कुराहरु गर्दै जिस्किने कर्म मा आज म निकै उत्तेजित भको थिये र सोफामा बस्दै पत्रकारको बुडिलाई हेर्दै थिये
यस्तै क्रममा मेरो नजर एक्कासी उनको खुट्टातिर गयो । मैले उनको खुट्टातिर हेर्दै जिब्रो भित्रबाहिर गर्दै मुख चुक्चुकैरहेकोचुक्चुकईरहेको थिएँ । उनले देखिहलिन्, म डराएँ, कि उनले केहिभन्ने हो कि भनेर तर त्यसो भएन उनि त झन् लजाउन पो थालिन् । त्यसैले मैले झन् घोरेर हेर्न थालें । उनले त बिस्तारै अफ्नो टांग फट्टाईन्, म झसङ्ग भएँ किनकि मैले उनले लगाएकोसेतो पेन्टी छर्लंगै देखें । उनको त्यो सेतो पेन्टी अति नै सुन्दर थियो । उनको त्यो पोटिलो पुतिको आकार बाहिर पेन्टी बाटनै छर्लंग देखियको थियो । उनको पुतिको केस्रा छुट्टियको थियो ।यो दृश्य देखेर मैले आफुले आफैंलाई बसमा लिन नै सकिन जसको फलस्वरुप मेरो हात मेरो लडोतिर गएको थियो । मेरो लडो यती ठन्केको थियो कि मेरो पाईन्ट नै छेडेर बाहिर आउलाजसरि । मैले बिस्तारै मेरा हातले मेरो लाडो पाईन्ट बाहिर बाट नै सुम्सुम्याउन थालें । त्यसपछि त झन् उनले निहुरेजस्तो गरेर बिस्तारै अफ्नो स्कर्ट माथि सरिन् । अबत झन् पुरैदेखियको थियो । बाहिरबाट नै मेरो लाडो छामिरहेका मेरा हात अनयासै पाईन्ट पाईन्ट भित्र नै पसेर लडोलाई हल्लाउन थाले । उनि आफु बसेको ठाउंबाट सरेर अलि उता गईन् र आँखाको ईसाराले बोलाईन्। म पनि के कम, उनि भएकै सोफामा गएँ । उनि बिस्तारै म भएतिर आईन् र म पनि । हामीदुवै जना टाँसिन पुग्यौं । मैले मेरो हात सोफामा अडाएँ र बिस्तारै खुट्टाको औंलाले उनको खुट्टामा छुन थालें । उनि लजाऊँदै थिन् । बिस्तारै मैले मेरो देब्रे हात उनको घांटीमा लेराएँ तरउनले केहि प्रतिक्रिया नै नजनाएपछि मैले मेरो हात बिस्तारै उनको काँधमा राखें । झन् उनि त लजाऊँदै खुट्टाका औंलाहरु चलाउन थालिन् । मेरो पालो बिस्तारै मेरो हात उनको त्यो पुक्कपरेका रसिला सुन्तलाका दाना जस्ता देख्दैमा एकैपटकमा कप्प खाऊ जस्ता ठुला-ठुला र पिउरी जस्ता गीला-गीला दुधका पोका सम्म लिएर आएँ । अनि एउटा औंलाले बिस्तारै उनको गिलो र कसिलो दुधको पोको छुन थालें, उनि त झन् पग्रेजस्तो लग्यो मलाई त्यसैले मैले मेरो देब्रे हातको पुरै औंलाहरुले उनको दुधसुम्सुम्याउन थालें । उनले ऊ…आ…अया…आया…ओ…ऑ…आई..ऊ…मम…उम्म…जस्ता आवाज निकाल्न थालिन्। अनि मेरो पालो मेरो दाहिने हात बिस्तारै उनको घोडामा राखें । देब्रेहातले एउटा दुध मोल्दै दाहिने हातले उनको साप्रा सुम्सुम्याउँदै उनको अनारी सम्म पुगें । उनि त झन् ठुलो स्वरमाओओ…हूहो…मरे…आमा…मलाई…मार…आया…ई…ऊ…ए…ओ…ऑ…जस्ता आवाज निकाल्न थालिन् । watch latest hd MMS scandals at http://indiansexvdo.com
एउटा हातले दुध मोल्दै अर्को हातले अनारी सुम्सुम्याउँदै बिस्तारै मैले उनको गतिमा किस गर्दै बिस्तारै कानमा अनि गालामा अनि फेरी बिस्तारै उनको मुखमा पुगें र मेरोमुखले उनको मुख टम्म थुनिदिएँ । त्यसपछि मैले मेरो दाहिने हात उनको पेन्टी भित्र छिराएँ । उनले धेरै पनि निकालिसकेकी रहेछिन्, जसलेगर्दा उनको पेन्टी पुरै भिजेको थियो । उनकोत्यो भर्खर उम्रन खोजेका सेता खैरा रौँ, आहाहा…कति प्यारो र सुन्दर अनि मैले मेरो हात निकालेर पेन्टीबाहिर बाटनै सुम्सुम्याउन थालें । बिस्तारै फेरी भित्र छिराएँ र उनको पुतिमाऔंलाले पुतिको ओरिपरी रगट्दै एउटा हातले दुध मोल्दै मुखमा किस गर्दै अर्को हातले उनको पुती चलाउन थालें । मैले अब दाहिने हातको चोर्नी औंला उनको पुती भित्र र बाहिर गर्नथालेको त उनि ऐया…उउउ…दुख्यो…ओं…य…स्स्स्स्स्स्स्स्स्स…उम्म्म्म्म्म्म्म …छिटो…छिटो…पोल्यो… भन्दै कराउँदै चित्कार अफ्नो मुखबाट निकाल्दै थिन् । उनलाई सायद धेरै मजाआइरहेको थियो त्यसैले मैले पनि ढिला नगरी बिस्तारै दाहिने हात उनको पुतिबाट झिकेर उनको स्कर्ट र टिसर्ट खोलिदिएँ अनि उनलाई किस गर्दै छिटोछिटो आफ्ना सबै कपडा खोलिनांगै भएँ र उनको पेन्टी पनि खोलिदिएँ । अब हामी दुवै जना जन्मजात नग्न भएका थियौं । दुवै हातले उनको दुध मोल्दै बिस्तारै मुखबाट किस गर्दै उनको त्यो कुवा सम्म पुगें र मजाले उनको त्यो कुवाको नुनिलो पनि खानाथालें ।उनि ओओ…हूहो…मरे…आमा…मलाई…मार…आया…ई…ऊ…ए…ओ…ऑ…जस्ता आवाज निकाल्दै थिन् । उनको मुखबाट अनयासै छिटो…plz…छिटो…अब…त…मारिदेउमलाई…मेरो राजा…मेरो राजा…छिटो छिराउन…मा सहन सक्दिन…छिटो लडो कोचन…मेरो पुती च्यातिदेउन ऐया…उउउ…दुख्यो…ओं…य…स्स्स्स्स्स्स्स्स्स…उम्म्म्म्म्म्म्म…छिटो…छिटो…पोल्यो… जस्ता सब्द निस्कदै थिए । मैले पनि मेरो लडो उनको पुतिको किनारमा दलें र बिस्तारै उनको पुतिको प्वालमा हालें तर तेत्रो पनि फ्याक्दा पनि मेरो लडो उनकोत्यो कसिलो पुतिमा छिरें । त्यसैले मैले मज्जाले बल गरेर धक्क दिएको त स्वात्तै छिर्यो । मैले मेरो लाड़ोडो एकछिन नाचलाईकन उनको पुती भित्रै रखिरहें उनि रुन छाडे पछि बिस्तारै पुतिभित्र लडो चलाउन थालें । अनि बिस्तारै लादोलाई भित्र बाहिर गरौँ थालें ।अब त उनलाई पनि दुख्न छोडेछ क्यारे उनले पनि तलबाट बल लगाएर मलाई साथ दिन थालिन् । त्यसपछि मैले पनि फटाफट् लडो भित्र बाहिर गर्न थालें । उनिआहा…ओहो…हेहे…उहु..कति मजा आयो…अलि भित्र…छिटो छिटो…deep…deep…fuck me baby…kill me baby…hurt me…मेरो राजा…मलाई नछोड…अझभित्र…म्म्म्म…ऊऊऊऊम्म्म्म…भन्दै एक्लै भट्भटाउँदै थिन् । यसरी करिब ३० मिनेट जति मच्चियपछि म सिथिल भएँ अनि उनि पनि….
November 4, 2014 admin	Posted in Nepali SEX Stories	Post Permalink
← छिमेकि साथी कमल संग चिक्दा को कुरा	बाजेसित चिकेको-fucked with my grand father →